Shiinaha Stainless Steel Dutch Weave Wire Mesh soosaarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Da Shang
Noocyada Weve -ka: Dharka Dutch -ka ee caadiga ah/Twill dutch weave
Astaamaha ugu muhiimsan ee mesh silig -xidhka leh waa in dhexroorka xargaha dunta iyo dunta iyo cufnaanta mesh ay leeyihiin isbarbar -dhig weyn. Sidaa darteed dhumucda mesh iyo saxitaanka sifeynta iyo nolosha adeegga ayaa si weyn u soo hagaagtay. Xaqiijinta shaandhaynta mesh labajibbaaran lama gaari karo.
Dhexroorka siligga dunsan Dhexroor dhexroor silig.
Sifaynta caadiga ah
gudahach mm gudahach mm
Waxqabadka: iska caabbinta aashitada, iska caabin alkali, iska caabin heerkulka sare ah, gilgil xoog leh iyo iska caabinta abrasion, waxqabadka sifeynta xasilloon, ganaax, saxnaan sare, iyo waxqabadka sifeynta gaarka ah.
Isticmaala:Badeecadda waxaa inta badan loo isticmaalaa gaaska, sifeynta dareeraha iyo kala -soocidda warbaahinta kale; si weyn loogu adeegsaday miirayaasha cadaadiska saxda ah, sifeynta shidaalka, shaandhaynta faaruqinta, sida shaandhaynta walxaha ceyriinka ah, aerospace, nadiifinta saliidda, daawada, sonkorta, batroolka, kiimikada, fiber kiimikada, caag,twax soo saarka ire, macdanta, cuntada, cilmi -baarista nadaafadda iyo warshadaha kale.
* ISO 9044 Dharka Warshadaha ee Wiiqan – Shuruudaha Farsamo iyo Imtixaanaadka
* ISO 4783-1 Shaashadaha siligga warshadaha iyo maro silig leh – Tilmaamaha doorashada cabirka daloolka iyo siligga isku -darka dhexroorka
* ISO 3310 shaandhooyinka tijaabada – Shuruudaha Farsamada iyo Imtixaanka
Hore: Monel mesh silig silig ah